ICJ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ဖွဲ့၊ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက အရာရှိကြီး ၂ဦးပါဝင် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ
ICJ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ဖွဲ့၊ စစ်ဥပဒေချုပ်...
27 พ.ย. 2562 - 10:37 น.
အထူးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ နေချုပ်ရုံးနဲ့ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့က ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်
ICJ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ဖွဲ့၊ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက အရာရှိကြီး ၂ဦးပါဝင်
နိုင်ငံတကာခုံရုံး ICJ မှာ တရားရင်ဆိုင်တဲ့အခါ ဥပဒေကြောင်းအရ အထောက်အကူပြုနိုင်မယ့် နိုင်ငံတကာ ရာဇဝတ်မှုတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန က နိုဝင်ဘာ ၁၁ရက်မနက်ပိုင်းမှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အဲဒီအထူးအဖွဲ့ကို ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေး၊ ပြည်ထောင်စုရှေ နေချုပ်ရုံးနဲ့ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးတို့က ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အထူးအဖွဲ့မှာ ဘယ်နှစ်ဦးပါဝင်ပြီး ဘယ်လို လူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ အသေးစိတ်မဖော်ပြပါဘူး။
ဒါပေမယ့်လည်း စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက နိုင်ငံတကာဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူ အရာရှိကြီး ၂ဦးပါတယ်လို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ဘီဘီစီကို နိုဝင်ဘာ ၂၇ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။
စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက အရာရှိကြီး ၂ဦးပါတယ်လို့ဆိုပေမယ့်လည်း လတ်တလောမှာတော့ ဘယ်သူဘယ်ဝါဆို တာကိုတော့ အမည်ဖော်ပြောဆိုလို့ မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၂၃ရက် တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက ဒုတိယစစ်ဥပဒေချုပ် ဗိုလ်ချုပ်သောင်းနိုင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်လာပြီး စစ်ဥပဒေတွေအပြင် ICJ ဆိုင်ရာမေးမြန်းမှုများကို ဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာရင်ဆိုင်ရမယ့် ICJ နိုင်ငံတကာခုံရုံးအမှု
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှု လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက် အင်္ဂါနေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ကြာသပတေးထိ ၃ ရက်တာ ကြားနာ စစ်ဆေး သွားမယ်လို့ ICJ က ထုတ်ပြန်
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာကို တရားစွဲထားတဲ့ အမှု လာမယ့် ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ ရက် အင်္ဂါနေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ကြာသပတေးထိ ၃ ရက်တာ ကြားနာ စစ်ဆေး သွားမယ်လို့ ICJ က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဂျီနိုဆိုက် ကွန်ဗင်းရှင်းလို့ ခေါ်တဲ့ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ်ကို ဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ ICJ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ အမှုဖွင့်ခံလိုက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပထမဦးဆုံး အကြိမ် ICJ ဘက်က တရားရုံးချိန်း ရက်တွေ သတ်မှတ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင်တွေ လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ် ခံရမှုကို တားဆီးဖို့၊ အပြစ်ပေး အရေးယူဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ဂမ်ဘီယာက နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်နေ့မှာ အမှုဖွင့် တရားစွဲ ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သီပေါမှာ မြေမြှပ်မိုင်းနင်းမိလို့ နိုင်ငံခြားခရီးသွားတဦးသေဆုံး
သီပေါမြို့နဲ့ ခြောက်မိုင်လောက်အကွာ၊ ပန်ညောင်နဲ့ ကွန်ဟောက်ရွာအကြားမှာ တောင်တက်၊ လမ်း လျှောက်ခရီး လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ဧည့်သည်၂ ဦးမှာ မိုင်းနင်းမိလို့ တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ နယ်စည်းမခြားပရဟိတ (သီပေါ) အဖွဲ့က သိရပါတယ်။
မနေ့က အင်္ဂါနေ့ ညနေ ၅နာရီလောက်မှာ အဖွဲ့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ပန်ညောင်နဲ့ ကွန်ဟောက်ရွာကြားဖြစ်တဲ့နေရာမှာလာ ကူညီဖို့ အကြောင်းကြားခဲ့တာကြောင့် မိုင်းနင်းမိသူ နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဦးကို သွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ကိုမျိုးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
သွားရောက်သယ်ယူတဲ့ ညနေ ၅နာရီမှာပဲ နိုင်ငံခြားသားအမျိုးသားက သေဆုံးခဲ့ပြီး အမျိုးသမီးကတော့ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့တာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။
မြေမြုပ်မိုင်းဒဏ် တတိယ အဆိုးဆုံး ခံရတဲ့ နိုင်ငံ
အဲဒီအချိန်မှာပဲ သေဆုံးတဲ့အမျိုးသားက နယ်သာလန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးတော့၊ ကျန်အမျိုးသမီးကတော့ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသူလို့ ကနဦးသိရှိထားတာကို ကိုမျိုးက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
သီပေါမှာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတွေ မိုင်းနင်းမိလို့ အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ကူညီရေးအသင်း တွေ သွားရောက်ကူညီပေးရတာ ပထမဆုံးလို့ ကိုမျိုးကပြောပါတယ်။ ဒီမတိုင်မီတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ သား အချို့သာမိုင်းနင်းမိကာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာတွေရှိဖူးတယ်လို့လည်း သူကပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၆ခုနှစ် ဧပြီလတုန်းကတော့ သီပေါနဲ့ ကပ်လျက်ရှိတဲ့ ကျောက်မဲမြို့နယ်ထဲမှာ ဂျာမန်ခရီးသွား နဲ့ သူရဲ့ ဘာသာပြန်တို့ မြေမြှပ်မိုင်းပေါက်ကွဲခဲ့လို့ အနာတရဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။
နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ မနေ့က အယ်လ်ဘေးနီးယားမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ အင်အားပြင်ငလျင်ကြောင့် လူ ၆ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆၀၀ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်
အယ်လ်ဘေးနီးယား အင်အားပြင်ငလျင်ကြောင့် ၆ဦးသေ ၆၀၀ ကျော်ဒဏ်ရာရ
နိုဝင်ဘာ ၂၆ရက်နေ့ မနေ့က အယ်လ်ဘေးနီးယားမှာ လှုပ်ခဲ့တဲ့ အင်အားပြင်ငလျင်ကြောင့် လူ ၆ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ၆၀၀ကျော် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်လှုတ်အပြီး ညပိုင်းမှာပဲ သေဆုံးသူတွေနဲ့ ဒဏ်ရာရရှိသူတွေကို ပြိုပျက်ကျနေတဲ့ အုတ်ကျိုးအုတ်ကြား တွေထဲကနေ ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်းအား ၆.၄ မက္ကနီကျူ့ရှိတဲ့ အင်အားပြင်းငလျင်က မြို့တော်တီရာနာရဲ့ အနောက်မြောက်ဘက် ၂၁မိုင် အကွာမှာ လှုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ ဒါးရက်၊ သူမိန်းတို့လို ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက်က မြို့တွေမှာ အသေအပျောက်အများဆုံး ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငလျင်ကြောင့် အိမ်ခြေရာမဲ့ဖြစ်သွားသူတွေကိုတော့ ယာယီတဲတွေနဲ့ ခေတ္တပြန်လည် နေရာချ ပေးထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ICJ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာအထူးအဖွဲ့ဖွဲ့၊ စစ်ဥပဒေချုပ်ရုံးက အရာရှိကြီး ၂ဦးပါဝင် အပါအဝင် မနက်ခင်းသတင်းများ